शाहरुख खान भेट्न घर छा’डेर हिँडेका दिदी-भाइको कथा ! – Khabarhouse
शाहरुख खान भेट्न घर छा’डेर हिँडेका दिदी-भाइको कथा !
Khabar house | १० बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:४७ | Comments
काठमाडौं : ‘धनक’ राजस्थानी गाउँका दस वर्षकी दिदी परी र उनका आँखा देख्न नसक्ने भाइ छोटुको कथा हो। परी शाहरुख खान र भाइ छोटु सलमान खानका डाइ-हार्ड फ्यान हुन्। हरेक दिन विद्यालय जानेबेला उनीहरू पैसा उफारेर टस गर्छन्। टस जित्नेले शाहरुख वा सलमानको कहानी सुनाउनुपर्ने सर्त राख्छन्। कहानी भन्ने-सुन्ने खेल खेल्दै उनीहरू लामो समय हिँडेर विद्यालय पुग्छन्।
छोटुको नवौं जन्मदिन नजिक आइरहेको हुन्छ। यो जन्मदिनमा परी छोटुसँग उनले आँखा देख्नेवाचा गरेकी हुन्छिन्। एकदिन परीले आँखा दानगर्न प्रोत्साहित गर्ने नारासहितको शाहरुख खानको पोस्टर देख्छिन्। त्यसपछि उनी नियमित शाहरुखलाई चिठी लेखेर हुलाक मार्फत पठाउन थाल्छिन्। परीले लगातार लेखेको चिठीको कुनै जवाफ आउँदैन।
यसैबीच परी र छोटुले शाहरुख राजस्थानको गाउँमा आफ्नो फिल्म छायांकनका लागि आएको खबर सुन्छन्। शाहरुखसम्म पुग्न पाए भाइले आँखा देख्न पाउने विश्वासले परी छोटुलाई लिएर छायांकन स्थल जाने निधो गर्छिन् । तर त्यो छायांकन स्थल निकै टाढा हुन्छ। घरबाट भागेर हिँडेका उनीहरू सोचेभन्दा धेरै टाढा भौंतारिन्छन्। भाइको मायामा समर्पित दिदी र दिदीको भरोसामा निर्धक्क भाइको यो यात्रामा अब रमाइला घटनाक्रमसँगै अप्ठ्यारा परिस्थिति पनि आउँछन्।
परी र छोटु शाहरुखको फिल्म छायांकन स्थलसम्म पुग्लान्? परीले छोटुसँग गरेका वाचा पूरा गर्लिन्? के छोटुले साँच्चै आँखा देख्लान् ? धनकले यस्तै प्रश्न र जिज्ञासा जगाउँदै दर्शकलाई एउटा रोचक यात्रामा डोर्‍याउँछ ? धनकको अर्थ इन्द्रेणी हो । परी र छोटुको जीवनमा सबै दुःख भुलेर इन्द्रेणी सपना पछ्याउने दत्तचित्त पात्र हुन्। परी बनेकी हेतल गडा र छोटुको भूमिका निर्वाह गरेका कृस चाबरियाले पूरै फिल्म धान्ने स्तरको अभिनय गरेका छन्।
धनकका निर्देशक नागेश कुकुनूर बालबालिका र किशोरकिशोरीका कथा भन्न सिपालु छन्। यही उमेर समूहकेन्द्रित उनको ‘इकबाल’, ‘लक्ष्मी’, ‘रकफोर्ड’ जस्ता राम्रा फिल्म बनाएका छन्। बालकलाकार केन्द्रमा रहेको यो फिल्ममा बालसुलभ मनोविज्ञान अनुसार कै संवाद, पात्र र घटनाक्रम देख्न पाइन्छ। दिदी-भाइबीचको नोकझोंकका क्षण जति रमाइलो छ, उनीहरूको भावनात्मक कोमल सम्बन्धले पनि उत्तिकै मन छुन्छ। उनीहरू जति झ’गडा गर्छन् उत्तिकै एकअर्कालाई माया गर्छन्।
बालबालिका यथार्थ भन्दा कल्पनामा रमाउँछन्। परी र छोटु पनि फिल्मभर शाहरुख र सलमानमा को राम्रो भन्ने प्रतिस्पर्धा रमाइलो शैलीमा देखाइएको छ। एकपछि अर्को साना मसिना रमाइला किस्साहरू आइरहने यो फिल्ममा दिदीभाइको यात्राका क्रममा जम्काभेट हुने पात्रहरू पनि मजेदार छन्। हरेक पात्रले परी र छोटुलाई जीवनको कुनै न कुनै पाठ सिकाएर जान्छन्।
परी र छोटुको यात्रालाई राजस्थानी समाजका राम्रा-नराम्रा प्रवृत्ति उजागर गर्ने मौकाका रूपमा निर्देशकले प्रयोग गरेका छन्। एकातिर यी दिदीभाइले अन्धविश्वासी, ढोंगी र अपराधी पात्र भेट्छन्, अर्कोतिर उदार र निश्वार्थ सहयोग गर्नेहरूको साथ पनि पाउँछन्। यस अघि नागेशले ‘डोर’ फिल्ममा राजस्थानी समाजको कथालाई दुई महिलाका भोगाइ मार्फत देखाएका थिए। यसमा बालबालिकालाई रोजेका छन्।
परी र छोटुको यात्रा ‘धनक’ मा राजस्थानको जीवनशैली र संस्कृतिलाई सचेत रूपमा देखाएका छन्। फिल्ममा राजस्थानी स्वादको संगीतले पनि कथा परिवेशसँग सम्बन्ध बनाइराख्छ। बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा ‘ग्रान्ड प्रिक्सफर बेस्ट फिचर’ अवार्ड पाएको धनकले भारतको ‘बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म’ विधातर्फको नेसनल अवार्ड जितेको थियो। भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।
काठमाडौँमा घट्यो डरलाग्दो घटना (भिडियो सहित)
रबी लामीछानेले सार्वजनिक रुपमै मन्त्रीलाई झण्डा मात्रै हलाएर हिँड्ने भनेपछी… (भिडियो सहित)
भाग्यमानी मानिस जो गल्ती गरेर पनि भाग्यले बा’चे, कल्पना पनि गर्न नसकिने दृश्य
भारतिय नेपाल प’सेर बच्चा चो’र्दै गर्दा भेटेपछि…
काठमाडौंको बन्द कोठामा ३ दिनदेखि दाजुभाई भोकभोकै (भिडीयो सहित)